11 Zvinhu Zvaunogona Kuita Kumira Kunzwa Kufinhwa Saka Nehupenyu - Blog
11 Zvinhu Zvaunogona Kuita Kumira Kunzwa Kufinhwa Saka Nehupenyu
Pfungwa yehupenyu kupfupika inowanzo sundidzirwa sechikonzero chekumbundira izvozvi, kukumbundira chero chii icho icho munhu anofanira kuita kuti awane mufaro wavo mune ino nguva.
Tora chirevo ichi kubva kuna Paul Coelho semuenzaniso:
Rimwe zuva uchamuka uye hakuzovi neimwe nguva yekuita zvinhu zvawakagara uchida. Zviite izvozvi.
Asi hupenyu hupfupi zvechokwadi here?
Ichokwadi kuti hupenyu hunogona kutapudzwa nekuda kwedambudziko, kurwara, kana mamiriro asingatarisirwe anokurova pasina kwaunosvika, asi hupenyu hausi kuzove hupfupi kuvanhu vazhinji.
Makumi emakore akareba.
Kana iwe ukatevera iyo yechinyakare nzira yehupenyu, iwe uchaenda kuchikoro kweazhinji emakore ekutanga makumi maviri emakore ehupenyu hwako, pamwe zvimwe.
Ipapo, iwe unosvetukira mumusika webasa kwauchashanda kuti pamwe utenge imba, kurera mhuri, uye chengetera pamudyandigere kwemakore makumi matatu kana makumi mana.
Uyezve netarisiro, iwe unorega basa, uye wotanga kurarama uchirarama makore ako esirivha negoridhe murunyararo uye munyaradzo nekutenda kubasa rawakaisa mukati menguva yehupenyu hwako.
Zvirinani, izvo zvinofanirwa kunge zviri chirongwa - hupenyu haugare uchiita nenzira yatinoronga nayo.
Asi zvakadaro, ndiyo nguva yakareba kana zvese zvisingaiti kuenda maererano nezvakarongwa.
Kuita chinhu chimwe chete nekudzokorora, zuva nezuva, vhiki nevhiki, mwedzi nemwedzi, gore negore unosemesa.
Vanhu vanoda zvakasiyana muhupenyu hwavo, kunyangwe avo vakagarika nehupenyu hunofungidzirwa, hwakarongeka.
Kushaikwa kwakasiyana siyana kunosiya vanhu vachinzwa kufinhwa uye zvinogona kupedzisira zvaita kuparara mune mazhinji kana ese mativi ehupenyu hwavo.
Ichi chinyorwa chichaongorora zvakadzama mune ichi chinonyengera kufinhwa. Ichaongorora kuti inonzwa sei, chii chinokonzeresa, uye kuti ungaikunde sei.
Saka ngatisvetukirei mukati, handiti?
Chii chinonzwa sekunge kufinhwa nehupenyu?
Kufinhwa nehupenyu hakuna kufanana neako kumhanya-kwe-iko-kuchigayo kufinhwa.
Kana hupenyu hwuchinzwa hunofinha, unomuka mangwanani kuenda kune nyika isina ruvara, runako, kana kukurudzira.
Unonzwa usina gwara. Unogumburwa nezuva, uchiita izvo zvinoda kuti nharaunda uite iwe, uyezve unobva warara uye unowira muhope dzinonetsa, dzisingazorore.
Kunyangwe kupera kwevhiki - kazhinji nzvimbo yekuzorora inoruma kubva kune iyo monotony yevhiki yekushanda - haina mufaro kwauri.
Chikamu chese chako chinoda kuti hupenyu hwako hushanduke, asi haugone kuona kuti unoda kuti uchinje sei, uye haugone kuzviunzira kuti uchinje.
Munongozivawo kuti inofanirwa… neimwe nzira.
Kusvikira panguva iyoyo, iwe uri wekudonha huni, uchiyangarara pamusoro pegungwa rehupenyu, uchingobhururuka uchienda pamusoro pemvura.
Iwe unogona kutove nehupenyu hunoshuviwa nevamwe - hukama hwakasimba, basa rakanaka, vana vanofara, imba yakanaka, fuma zvinhu - asi iwe uchiri kusiiwa uchida.
Unogona kudiwa nevazhinji uye uine vamwe vanovimba newe, zvakadaro unonzwa kuti panofanira kuva nezvakawanda kuhupenyu kupfuura izvi.
Uye kunzwa uku hakumanikidzwi kune pfungwa chete…
Kufinhwa nehupenyu kunopinda mumuviri wako zvakare. Izvi zvinogona kukonzera kutemwa nemusoro, kuomarara kwemhasuru, matambudziko ekugaya, uye kushomeka kwesimba pakati pezvimwe zvinhu.
Izvi ndezvechokwadi, mweya-unopwanya kusuruvara unonzwa senge.
Kufinhwa uku kwakafanana here nekuora mwoyo?
Mhinduro pfupi ndeyekuti: kwete nguva dzose.
Iwe unogona kusangana neichi chakasuruvara chakadzama pasina hazvo kuva uchishungurudzika mune yekiriniki pfungwa.
Uye iwe unogona kutambura nekuora mwoyo uye kusave wakazara uye zvachose kufinhwa nehupenyu hwako hwezuva nezuva.
Pane kuwirirana pakati pemapoka maviri uye panogona kuve nekubatana pakati pekufinhwa nekushungurudzika.
Asi kushushikana kunogona kuve nemhedzisiro yakakomba, saka kana usina chokwadi kuti ungangorwadziwa here, zvakakodzera kutaura nachiremba kana nyanzvi yehutano hwepfungwa.
Ndeipi basa rinoita tekinoroji mukuti tifinhe?
Zvinonakidza kuti, kunyangwe paine sarudzo dzakawanda dzatinogona kuwana dzevaraidzo, isu tinoramba tichizviona tichinetseka uye tichiregedza.
Isu tinotakura mudziyo muhomwe medu uyo ​​unotipa mukana wekunakidzwa nekuvaraidzwa uye pamwe ruzivo rwevanhu.
Zvinoitika sei kuti isu takasurukirwa neizvozvo pamunwe wedu?
Kuwedzeredza kunopa. Nhamba isingaperi yesarudzo yevaraidzo inogona kuita kuti vese vaoneke sevanoshaya uye vanofinha.
Mushure mechinguva, tinozviwana tave kugara pamubhedha wedu, tichitsvaga zvisina tsarukano kuburikidza nevezvenhau kana kuyedza kutsvaga chinotevera kubhawa kutarisa panzvimbo pokubuda nekuita nehupenyu.
Zvizhinji zveinternet ruzivo rwakavakirwa pakukomberedza kugutsikana kwechinguva. Nekuda kweizvozvo, avhareji yekutarisa span iri kupfupisa.
Izvi zvinoita kuti zviome kupinda muzviitiko zvakaomesesa izvo zvinogona kupa chirevo, mufaro, kana varaidzo chaiyo. Zvinotora nguva kugona chero basa.
Tinofanira kudaro iva nemoyo murefu zvakakwana kuvaka nekuteedzera zvinhu zvatinoda, kungave iri basa, mhuri, kana hupenyu hune chinangwa.
Nei zvichikosha kwazvo kuva neupenyu hunogutsa?
Pfungwa yekusagutsikana kusingaperi ndeyekuti munhu ari nguva dzose kusafara nenzira iyo hupenyu hwavo huri kuenda kana yavo yazvino trajectory.
Hatigone kutiza mienzaniso yese yezuva nezuva kuzvitonga. Hapana munhu anofarira kumira mumitsara, kutambisa nguva yavo vagere munzira, kana kuyedza kuita kufarira misangano isina maturo.
Asi izvi dzimwe nguva chikamu chakakosha chekufamba kuburikidza nehupenyu.
Chokwadi chakashata ndechekuti, hapana munhu anombogara achifara nguva dzese. Ndiko kutarisira kusinganzwisisike kunotungamira mukuwedzera kusuwa uye kusagutsikana.
Kusagutsikana kusingaperi kunoitika kana munhu asina kugutsikana nehupenyu hwavo hwese.
Zvichida munhu akararama hupenyu hwakanyarara, achigunun'una kubva pabasa risingabatsiri kuenda kubasa risina basa, hushamwari husina hushamwari hushamwari husina hushamwari, hukama husina hukama nehukama husina basa.
Vane nguva yakaoma yekuwana mufaro mune chero chinhu nekuti zvese zvinonzwa saka zvakadzika uye hazvina musoro.
Hollowness iyoyo inogona kukonzeresa maitiro mazhinji asina hutano nezvirwere - kusanganisira kushandisa zvinodhaka nedoro, kushushikana, uye kuzvidya mwoyo.
Dzimwe nguva ndiyo imwe nzira yakatenderedza, uko kushushikana kuri iko chaiko chikonzero chekusanzwa chero mufaro kana mufaro muhupenyu hweumwe.
Iwo manzwiro asina chinhu anogona kukonzera kuti munhu apinde kuzviparadza kungoedza kupaza kunetesa kwehupenyu hwavo.
Pamwe vanodambura hukama pasi nekuti havasi kufara kana kukanganisa dzimwe nzvimbo dzehupenyu hwavo kuti vagadzire mimwe mitambo.
Izvo hazvireve kuti nguva yese yekuzorora kana kufinhwa chinhu chakaipa. Hazvisi.
Mumwe anofanirwa kutora nguva yekuzorora uye kupora vasati vanyura mune imwe hobby, bhizinesi, kana kunakidzwa. Kana ukasadaro, unoisa panjodzi yekuzvipisa wega nekuzviwana wadzoka pakutanga. Kuzvimisikidza pachako kwakakosha.
Kuva neupenyu hune chinangwa kunorevei kwauri?
Pfungwa yehupenyu hune chinangwa ndeye iyo inopa kugutsikana kwemunhu, pfungwa yekugutsikana, uye imwe nhanho yemufaro.
Kupesana nevezvenhau uye manzwi maonero, mumwe anofanirwa kungwarira kuputika mufaro mune zvine chirevo. Izvo zviviri hazviwanzoenderana.
Semuenzaniso, pamwe pane mushandi wezvemagariro akadzika midzi mukuyedza kubatsira vatengi vavo kuvandudza hupenyu hwavo.
Izvo zvinogona kuunza hukuru hwekuita uye kugutsikana, asi zvakaoma kutarisa vanhu vachitambura zuva nezuva uye nezuva.
Zvingave zvisinganzwisisike kufunga kuti mumwe anowana mufaro wavo muhondo uye nerima divi rehupenyu, asi vamwe vanhu vanozviita. Vamwe vanhu vanobudirira pairi.
Vamwe vanosarudza kuve mukukakavara nekurwira chinhu chinoreva chimwe chinhu kwavari, kuve chikamu chechimwe chinhu chakakura kupfuura ivo. Uye zvakare, izvo zvinovapa imwe nhanho yekugutsikana kwemunhu uye mufaro, asi zvingave zvisina kuchenjera kuzvitarisira.
Kunyudzwa mukati uye kuona kutambura nguva dzose kunogona kutapudza munhu mukushungurudzika kana vasingakwanise kuzviisa muchikamu uye kuzvitarisira zvakanaka.
Vanhu vanowana chirevo nenzira dzakasiyana.
Kune vamwe, kunenge kuri kushanda basa ravanofara uye vanofara nekuve naro. Vamwe vanogona kuwana zvarinoreva mukukudziridza nekukura mhuri ine rudo.
Vamwe vanogona kuiwana mukushandira vamwe kana vasina kusununguka. Vanyori vanogona kuiwana mukugadzira. Masayendisiti anogona kuiwana mukuwanikwa. Kune huwandu husingaverengeke hwenzira, dzese dzinoshanda kune imwe nhanho.
Iko hakuna kusetwa, imwe nzira yekufara, zvinoreva, uye kunzwa kugutsikana nehupenyu . Nzira yako ichave iri akasiyana newe .
Inogona kugovana zvakafanana nevamwe vanhu, asi ichave iri basa rako kuona kuti ndeipi nzira inoita kuti ive nenjere kwauri uye kuitevera.
kutaura sei kana mukomana achingoda kurara newe
Izvo hazvireve kuti iwe unofanirwa kuzvienda wega kana kuti hapana munhu anokwanisa kukubatsira munzira yako, kungoti iwe haufanire kutarisira kuti chero munhu angangokwanisa kukupa iwe mune yakashongedzwa package ine uta pamusoro. Izvo hazvigone kuitika.
Ini ndinowana sei izvo zvinopa dudziro uye mufaro muhupenyu hwangu?
Zviri nyore sezvizvi.
Zvinonzwika kunge zvakagadzirwa, asi iyo chete nzira yekuti uone zvechokwadi zvinopa mufaro, kugutsikana, uye zvinoreva muhupenyu hwako kushingairira kuita hupenyu uye kuita zvinhu.
'Asi ko kana ndisingazvifarire?'
Ipapo hauna. Uye iwe enda kune chimwe chinhu.
Kunyangwe iwe ukaita zvinhu zvausingade kana kufarira, urikukudza ruzivo rwako uye maonero epasi, izvo zvinokupa iwe kugona kubatana nevanhu vazhinji uye kufambisa kunzwisiswa kuri nani kwezvaunoita nezvausingade.
Mikana yakanaka chaizvo iwe uchaita zvakati wandei zvinhu zvausingade usati wawana zvine musoro izvo zvaunoita.
Kana pamwe haudi! Pamwe iwe uchaedza chimwe chinhu chitsva uye uwane icho chinopa kugutsikana uye kuzadzikiswa.
Haifaniri kunge ichidhura. Iwe haufanire kunge uchibhururuka pane imwe $ 5,000 rwendo kune imwe inopisa tradhiso kuti uzviwane iwe.
Tora kadhi reraibhurari, verenga kana teerera mamwe mabhuku. Ita basa rekuzvipira pamwe nevanotambura kana mhuka. Iva chipangamazano kune mumwe munhu ari kutsvaga kuti awane nzira yavo. Tora kosi yehunyanzvi kunzvimbo yemunharaunda.
Izvi zvinhu zvese inzira dzisingadhuri dzekukura semunhu uye nekuona zvinhu zvitsva pasina kutora selfies kuMachu Picchu kana kubatwa nevanyengeri nevatengesi vemumigwagwa muCairo.
Chinhu chakanyanya kukosha kuita zvinhu. Chero chinhu chiri nani kupfuura chero chinhu. Kana zvisiri kukushandira, chinja zvinhu zvauri kuita uye edza chimwe chinhu chitsva.
Zvakadiniko netarisiro yenzanga kwandiri?
Ivo vanofunga, ivo maartist, ivo vakasununguka vanofunga vanogona kuzviwana ivo pachavo vanofinhwa uye vakasungirirwa neayo dzimwe nguva akaomarara mamiriro ehukama kuenderana.
Dambudziko rinowedzerwa nekumanikidzwa kwenzanga nevezera rako uye mapoka kuti akwane mubhokisi riri nyore kunzwisisa, rakasununguka.
Bhokisi inzvimbo yakasununguka kune vamwe vanhu. Kune vanhu kunze uko vanofara kwazvo kutora maonero echinyakare ezvinotarisirwa neveruzhinji kubva kwavari nekuti zvinopa gwara rakajeka, iro ravanofunga kuti richavapa mufaro uye kugutsikana.
Dambudziko nderekuti havazi vese vanokwana mubhokisi iro.
Zvakatoipisisa, nzanga inofarira kuunganidza kunyadziswa, kushoropodzwa, uye kusekwa kune chero munhu anosarudza kumira kure neboka revanhu uye kubvunza mamiriro ezvinhu.
Ichokwadi chisina kunaka ndechekuti izvi hazvigoneke kuchinja. Iyo mweya yakasununguka yenyika vanofanirwa kukwanisa kudzora tarisiro ine hukasha uye kushoropodzwa kusingabvumirwe kana ivo vaine tariro yekuwana yavo pachavo zvinoreva uye kugutsikana muhupenyu, nekuti nzira yakarohwa chete haina kuitirwa ivo.
Pamwe vakagadzirirwa kuita zvimwe. Pamwe zvakagadzirirwa kuunza mwenje munzvimbo dzine rima, kukurudzira kufunga kwemahara, uye kubatsira kuputsa zvipingamupinyi zvemagariro izvo zvinokanganisa vamwe vanhu.
Mweya wakasununguka ungangoita kumira uye kuoma munzvimbo inodzvinyirira, yakarongeka senge yevakuru vakuru vekambani kana semubereki anogara-pamba.
Vanogona kuita zvinhu izvi here? Chokwadi. Vanhu vanogona kuita zvakawanda zvezvinhu zvavasina kukodzera kukodzera. Vanofanira here? Zvakanaka, iwo mubvunzo unogona kungopindurwa nemunhu iyeye chete.
Kunyangwe kana vakadaro, ivo vanozoda kuve vanokwanisa kuchinjisa kugona kwavo nemweya kana vachida kuramba vachifarira uye vachiita hupenyu.
Izvi zvinogona kureva zororo regore kune imwe nzvimbo inonakidza, yehunyanzvi kana yekutamba makirasi, kana chimwe chinhu kukurudzira chaizvo musimboti wemweya wavo uye nekupa kukurudzira kwehungwaru.
Chii chatingaite kuti titore kufinhwa kwehupenyu?
Usati wawana nzira dzakakodzera kwazvo dzekurwisa kusuruvara kwako, unofanirwa kuongorora izvo zvinokonzera izvi.
Uri kungofinhwa nehumwe hupenyu hwako? Nekuti uri wega? Nekuti haunzwi kupokana?
Hupenyu hwako hunofinha here nekuti vanhu muhupenyu hwako vakakubereka? Hapana here mune ramangwana rako kuti ufare nazvo?
Iwe unonzwa uchimanikidzwa nemamiriro ezvinhu asingakwanise kudzora hupenyu hwako here?
Wakave nedura risina kubatwa remagetsi uye zvingangoda zvinoda kuburitswa?
Uri kurarama hupenyu hwechokwadi, kuyedza kuve mumwe munhu wausiri?
Kunyanya iwe paunogona kukona mukati pane iyo (s) yekusuruvara kwako nehupenyu, zvinonyanya kutariswa iwe zvaunogona kuve kana iwe uchienda uye uchiita pamwe nazvo.
Pano pane zvishoma zvezvinhu zvaunogona kuyedza kurerutsa kufinhwa kwako.
1. Ita basa rekuzvipira kana rekunze nesangano.
Basa rekuzvipira inzira yakanaka kwazvo yekubuda kunze, kusangana nevanhu vatsva, uye nekupa chimwe chinhu chakanakira nyika.
Kune akawanda masangano anoda zvese kubva pane zvakajairika kusvika kune vane hunyanzvi vashandi. Iwe unogona kutokwanisa kuisa yako hunyanzvi hunyanzvi uye ruzivo kuti ushandire chikonzero chine musoro.
Imwe sarudzo ndeye joina sangano rehunyanzvi rine chekuita nemunda wako. Izvo zvinobatsira kwete chete kuputsa kusurukirwa uye monotony, asi kubatana nevanhu vatsva vaunogona kugona kukudziridza hukama hwehunyanzvi navo.
2. Dzidza ruzivo rutsva.
Kune nzira dzakawanda dzekufamba nezvekuvandudza seti nyowani yehunyanzvi. Iyo internet yakazara nemavhidhiyo uye magwara ekuti ungatanga sei mumabasa akasiyana.
Iwe unogona zvakare kusarudza kuti kudzokera kukoreji kunotora mamwe makosi zano rakanaka zano.
Koreji kosi inopa chimiro, kutungamira, uye kuwana kune mumwe munhu anoziva nezve hunyanzvi iwe hwauri kudzidza nezvazvo.
Online koreji inogona kuita kuti zvive nyore kuenda kumakirasi kana iwe uine hupenyu hwakabatikana.
3. Ita ushamwari hutsva mumagariro.
Unowana kupi shamwari nyowani? Panogona kunge paine zviitiko zvemuno uchienda kwaunogona kusangana nevamwe vanhu vanobva munharaunda yako kana mapoka ezvido zvinoratidzira zvinogara zvichisangana.
Vanonamata vangangoda kuenda kumasevhisi akajairwa kana zviitiko zvinoitirwa nenzvimbo yavo yekunamatira.
Yemunharaunda enhau enhau mapoka anogona zvakare kuve nzvimbo yakanaka yekuwana zviitiko kana kusangana kumusoro.
4. Kufamba uchienda kunzvimbo yausati wambove.
Kufamba hakudi kuve kure uye kure kubatsira kubatsira kuunza kumwe kunakidzwa kuhupenyu hwako.
Zvinogona kuve zvakapusa sekubuda kunze kweguta kuenda kune rimwe basa kwaunogona kuwana nguva yakanaka uye kuzorora.
Zvichida kunze kweguta konzati uye husiku muhotera?
Rwendo rwepaki yenyika kana zvimwe zvinokwezva zvakasikwa?
Kana kuti pamwe chengetera imwe mari uye rova ​​zvishoma kumberi kune imwe shanduko hombe yenzvimbo.
Kunyangwe rwendo rurefu rwemugwagwa rwunogona kuve zororo rakanaka kubva kune mumwe wezuva nezuva hupenyu.
5. Tsvaga basa nyowani kana chinja mabasa.
Hazvina kujairika kuti vanhu vapedzisire vafinhwa nesarudzo yavo yebasa kana basa.
Ivo vanogona kutoona kuti ivo vakaita sarudzo isiriyo mune iro basa rekutevera uye vanofanirwa kutarisa dzimwe sarudzo.
Sarudzo yekurega basa uye / kana kushandura nzira dzebasa haimbove yakajeka, asi zvinogona kudikanwa kuti uwane mufaro nerunyararo muhupenyu hwako.
Vamwe vari kungoda zvakanyanya nguva kana simba remanzwiro. Vamwe vanogona kusapa kukurudzira kwakaringana kana kukupa iwe imba yekukura iyo iwe yaunoda chaizvo.
Kana iwe usiri kufara kana kugutsikana nebasa rako, inogona kunge iri nguva yekutanga kutsvaga shanduko.
6. Shingairira uye ita maekisesaizi.
Chiitiko uye kurovedza muviri zvinobatsira zvakanyanya kuhutano hwepanyama uye hwepfungwa. Vanachiremba vari kudaidzira wakagara mararamiro ehutsi hutsva maererano nenjodzi dzehutano.
Uye nemabasa mazhinji achiitika kuseri kwedhesiki kwechikamu chikuru chezuva, hazvishamise kuti vanhu vari kuwedzera kushushikana nezve hupenyu hwavo.
Vanhu vanoda kurovedza muviri kuti vabatsire kukurudzira kunzwa kwakanaka makemikari ayo muviri wako unoburitsa kana iwe uchiita mune izvo zviitiko.
Tanga zvishoma uye wova nezvimwe zvinangwa zvekubuda kunze uye kushingairira. Uye kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchatove uchishingairira, isa zvimwe zvinangwa zvine simba - sekupedzisa nhangemutange kana kuvandudza zvaunogona.
7. Gadzira humwe hunyanzvi.
Iwo maartist epasi anowanzo fanirwa kuumba neimwe nzira kana imwe. Kune vanhu vazhinji vanodzikiswa nekuda kwemaonero evamwe kana nekuti hupenyu hunongovaramba nguva yakakodzera.
Nyanzvi inomira kugadzira inofanirwa kufunga kudzoka mairi. Unyanzvi hunobatsira kuchinjisa pfungwa yekugadzira uye hunopa pfungwa yekuzvikudza uye kubudirira mune rimwe basa.
Joinha nharaunda ine hutano yevanyori vanoita zvakafanana svikiro uye shanda mukuvandudza nekupedzisa ako mabasa.
Iwe haufanire kunge uri mukuru pazviri. Vanhu vashoma kwazvo vari. Chinhu chakakosha kukumbundira hunyanzvi hwako kana zvichikupa mufaro.
8.Pedza yakawanda yemhando nguva nevako vaunoda uye cheka vanhu vane chepfu.
Icho chinhu chinozivikanwa kuti kushandisa yakawanda yemhando nguva nevako vaunoda kunokanganisa pfungwa kuburitsa akati wandei kunzwa makemikari akanaka senge endorphins.
Zviri nyore kwazvo kurega hushamwari hwemunhu nehukama zvichitsvedza nehupenyu hwakabatikana sei kune wese munhu.
Mumwe anofanirwa kuedza kuchengetedza hukama ihwohwo hwakasimba nekuedza kuti arambe achitaurirana neshamwari uye nemhuri.
Izvi zvinowanzoreva kuenda kumagungano uye zvinhu zvausingafarire kana kuda kuenda.
Kune tambo yakajairika yekusada kuve munharaunda kana kuneta zvakanyanya kuti utore chikamu, asi kana ukawira mune iyo pateni, hupenyu hunokusiya kumashure.
Enda kune zvinhu kana iwe wakokwa, kana edza kukanda pati yako wega kana usina zvakawanda zviri kuitika.
Uye funga kucheka vanhu vane chepfu kubva muhupenyu hwako kana paine chero. Ivo idhizaina rakanyanya pamufaro wemunhu uye rugare rwepfungwa.
9. Tsvaga chinangwa kana chikonzero chakakura kupfuura iwe.
Vanhu vanofarira kuva vevamwe . Vanodawo kupa kune chimwe chinhu chakakura kupfuura ivo.
Kuwana chinangwa kana kukonzera kuzvienzanisa uye nehunyanzvi hwako neinogona kupa pfungwa yekuzvikudza uye mufaro mukuita mutsauko pasirese.
Izvo zvinogona kutaridza sezviri nyore kutaura pane kuzviita, asi chaizvo kune akawanda mafambiro uye mapoka kunze uko ari kuyedza ita shanduko dzakanaka pasirese kuti iwe unogona kuve chikamu che.
Gadza uye uteedzere zvinangwa zvinokupa iwe pfungwa yekugutsikana.
Kuisa zvinangwa chikamu chakakosha chekuzvivandudza-wega uye kunzwa sekunge mumwe arikuita zvinhu muhupenyu hwavo.
Zviri nyore kukukurwa pasina chinangwa kana nzira, asi kuita izvi kunokutadzisa kugona kunzwa sekunge iwe wakasarudza chimwe chinhu chawaida kuita uye kuchiita, kunzwa uko kunogona kupa yakanaka hit ye ​​dopamine kana iwe ukayambuka uchibva pane yako-yekuita rondedzero uye kuwana simba.
Kune nzira dzakawanda dzekumisikidza zvinangwa, asi kazhinji imwe ingangoda kuisa mapfupi, epakati, uye kwenguva refu zvinangwa zvehupenyu hwavo.
Zvinogona kunge zvine chekuita nehutano hwako, basa, hupenyu hwega, kana zvaunofarira.
11. Regedza kuita zvinhu zvisingakunakidze kana kukuunzira mufaro.
Pakutanga takataura nezvekuyedza zvinhu zvitsva kuti uwane izvo zvinounza iwe mufaro uye chinangwa.
Asi ko zvakadii nezvese zvinhu zvauri kuita izvozvi izvo usadaro kununura chero emanzwiro iwayo?
Izvi hazvireve kuti iwe unogona kunzvenga ako ese mabasa ezvino. Mushure mezvose, kana iwe uine vamwe vanovimba newe kuti uvape uye / kana kuvatarisira, iwe unofanirwa kuzadzisa izvo zvisungo.
Asi tarisa pahupenyu hwako uye pazvinhu zvaunoita uye zvibvunze pachako kana zvine zvazvinoreva kwauri.
Zvichida iwe unotenga chete nekuda kwekutenga.
Kana iwe unotarisa nhau manheru oga oga kungozadza nguva.
Kana kuti pamwe iwe unopembera zvakaoma manheru eChishanu ega ega nekuti shamwari dzako dzese dzinozviita uye unogara uchizviita.
Kana chimwe chinhu chisisanzwe chakakodzera nguva yako, usachiita.
Ndokumbira utarise: zvakakosha kuti iwe utaure nehunyanzvi kuti uone kana uri kutambura nekushushikana usati warega pane izvo zvinhu zvingangodaro zvakambokuunzira mufaro. Sezvambotaurwa pakutanga muchinyorwa, kushushikana kunogona kuve chikonzero chekuti unzwe kufinhwa uye kusafara.
Hupenyu husina kufinhwa…
… Hupenyu hunoteverwa hune chinangwa. Izvo hazvina basa chaizvo kuti chinangwa chako ndechei, chero bedzi iwe uchigona kuwana imwe.
Nzira yakanakisa yekuwana imwe ndeye kungobuda kunze uko wotanga kuita zvinhu.
Unogona kuona kuti zvinhu zvaunosarudza kuita hazvireve kuti zvinokutungamira kumafaro kana mufaro, asi zvinogona kukupa iwe ruzivo, ruzivo, kana vanhu vaunoda kuti upinde mune imwe nzira.
Usarega malaise kana kushushikana kuchikukanganisa. Dzokera kunze uko uye ramba uchiedza.
Uye kana iwe ukaona kuti zvakanyanyisa kuoma kana kuti haugone kuwana gwara wega, zvingave zvakakosha kutsvaga rubatsiro kubva kune vanopupurirwa hutano hwepfungwa chipangamazano kana murairidzi wehupenyu.
Usazeze kutsvaga rubatsiro kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinetseka uye usina chokwadi chekuti gwara ripi raunofanira kuenda.
Kunyange zvakadaro hauna chokwadi kuti ungarega sei kufinhwa nehupenyu? Taura nemudzidzisi wehupenyu nhasi anogona kukufamba nenzira iyi. Simply tinya pano kuti ubatanidze neimwe.
Kufinhwa Muhukama Hwako? Zvibvunze wega Iyi Mibvunzo mitanhatu Nei
Kana Iwe Wakarasikirwa neMojo Yako, USAITE Izvi Zvinhu gumi nerimwe
Maitiro Ekuzviunzira Iwe Kuti Uite Chinhu Chausingade Kuita
Kuvapo Kushungurudzika: Maitiro Ekukunda Kwako Kunzwa Kwekusakosha
24 Mibvunzo Yekubvunza Usati Wasiya Zvese Kuseri Kuti Utange Hupenyu Hutsva
sei kubvisa mukomana wako pafoni
chii chakaitika kuna jeff witteks eye
kusaina munhu ari kuedza kukutsamwisa
sei akatarisa mumaziso angu
nguva yekupedzisa kwenguva yakareba hukama hwemibvunzo
chii chiri kuuya kuNetflix munaAugust 2020